"FBSမှချီးမြှင့်ပေးမယ့် မာစီဒီးကား"ပရိုမိုးရှင်းမှာ ဆုရရှိသွားတဲ့ ကံထူးရှင်ကိုကြေငြာပေးရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် FBSမိသားစုမှ လွန်စွာမှ ပျော်ရွှင်နေမိပါတယ်. ကံထူးရှင်ကတော့ Malaysia မှ Mohd Azmi Bin Mohamed Mokhtar ဖစ်ပါတယ်! ပြိုင်ပွဲဝင်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာထဲမှ ပေါက်မဲကို ရရှိသွားသူဖြစ်ပါတယ်.
ဆုမဲနှိုက်ရွေးချယ်သည့်အစီအစဉ်ကို FBS ယူကျု့ချယ်နယ်တွင်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ.
ဆုချီးမြှင့်သည့် အစီအစဉ်နှင့် အင်တာဗျူးအစီအစဉ် ဗီဒီယိုကိုလဲ မကြာမီထုတ်လွှင့်ပေးပါမည်။! မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ! အကောင်းစား ကားသစ်ကြီးကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မောင်းနှင်ရတဲ့ ကံထူးရှင်ရဲ့စိတ်ခံစားပျော်ရွှင်မှု အပျော်တွေကို FBSအဖွဲ့နှင့်အတူ ဖောက်သည်များအားလုံးပါ အတူတူမျှဝေခံစားနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးပါမည်။.